Umenzi weengxowa zeblue ezigqibelele kunye nefektri Huanna
Igama lemveliso: Iimvulophu zokuPosa ngokuQinisekayo Uhlobo lweMveliso: Izinto zokuposa
Umbala: White, Mthubi, Luhlaza, ngentando yakho Izinto: I-PLA kunye nezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane
Indawo yokuQala: IShanghai, iTshayina Igama lebrand: Uhlobo lwendalo
Inombolo yomzekelo: I-HNM-4036P Isicelo: Ukubonelela ngeNkonzo yokuPakisha, i-E-yorhwebo, ukuSongwa kwePallet, ukuhambisa inkonzo
Ubukhulu: Elungiselelweyo Ubungakanani Ubukhulu: Iimfuno zabaThengi
Ukuhanjiswa: Iintsuku ezingama-30-40 Ukupakisha: Ngentando
Phawu: Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, Ezinokunyibilika, Ezinyikinyayo-ubungqina, Ukuncamathela okuqinileyo, i-Opaque, Ukuprinta ngokugqibeleleyo, uKhuseleko Uhlobo lweShishini: Umenzi
Iingxowa zethu zeblue lolona khetho lubalaseleyo kwizinto zobuqu ezibuthathaka okanye ezixabisekileyo kunye nentengiso. Kukho iimeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa, ezinjengokuthumela izinto zexabiso ezinje ngeefowuni eziphathwayo, ukupakisha iimveliso ezibuthathaka njengeglasi. Kananjalo inokusetyenziselwa ukugcina izinto ezixabisekileyo, kuba ayinamanzi kwaye ilahla ubungqina. Iingxowa ze-Bubble zinokuxhathisa kweenyembezi kwaye zilula, ngenxa yoko akukho mathandabuzo okuba zinokugcina iimveliso zakho zintle kwaye zikhuselekile ngelixa ugcina iindleko zokuhambisa. Singayitshintsha imibala kunye nobungakanani beengxowa zebhola ngokwemfuno zabathengi. Siza kubonelela ngezisombululo ezahlukeneyo ngokukhawuleza ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Ngaphandle koko, sinamaqela aqolileyo okunxibelelana nabathengi, kwaye umzi-mveliso wethu unokuvelisa iibhegi zeblue zeenkcukacha ezahlukeneyo kunye nemibala. Ewe kunjalo, ilogo kunye neepateni eziyiliweyo zinokuprintwa kuyo. Ke ilungele zombini ukuthengisa kunye nokusetyenziswa buqu. Ngokukodwa ukuthumela iimveliso ze-3C. Izinto ezisetyenzisiweyo kwingxowa ye-bubble zizonke zendalo, yiyo loo nto zi-100% ezinokuchuma kwaye zinokuboliswa ziintsholongwane. Sebenzisa ibhegi yethu yeblue ukugcina ukuhambisa kwakho kukhuselekile.
Uncedo olubalaseleyo lweebhegi zethu zeblue zizinto ezinokuboliswa ziintsholongwane. Inkqubo yokuvelisa ayinangcoliseko, kwaye iimveliso zokugqibela zinokuphinda zenziwe ngokutsha kwindalo. Kwimeko yokufaka umgquba kwimizi-mveliso, iingxowa ziqhekeka ngokupheleleyo kwiintsuku ezili-180. Kwimeko yokufaka umgquba ekhaya, ibhegi ithoba isidima ngokupheleleyo kwisithuba seminyaka emi-2. Kwimeko-bume yendalo, ibhegi ithatha malunga neminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukuthotywa ngokupheleleyo.
Inkampani yethu iyaqhubeka nokusebenzela abathengi ngomgangatho ophezulu, amaxabiso aphantsi kunye nokuhanjiswa kwangexesha. Sibamkela ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi lonke ukuba basebenzisane nathi kwaye bandise ishishini lethu. Ukuba unomdla kwizinto zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Singathanda ukukunika ngolwazi oluthe kratya.
Egqithileyo UkuPakisha okuPhezulu kwePlastiki ekumgangatho ophezulu
Okulandelayo: CPLA Zokusika